जब तेश्रो संक्रमितको मृत्यु भनेर हल्ला फैलाइयो ! - Nepali News Nepal
७ जेठ २०७७ काठमाडौं : केहि घण्टा अघि प्राय नाम चलेका संचार माध्यमले समेत कोरोना संक्रमित थप एक व्यक्तिको मृत्यु भएको र हाल सम्म कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको संख्या ३ पुग्यो भनेर हल्ला फैलाए। तर केहि घण्टा नबित्दै सोहि समाचार गलत भएको भन्दै सच्याउन बाध्य भएका छन्।
के थियो त घटना ?
गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाका ४१ वर्षीय शिक्षक रुपन्देहीको मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालमा जेठ १ गते भर्ना भए । उनलाई अहिलेसम्म भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । ज्वरो आएर अस्पताल भर्ना गरिएका उनको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ ।
स्रोतका अनुसार जीवित व्यक्ति’bout झूठो विवरण दिएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रीले अस्पतालमा फोन गरेर तुरुन्त विज्ञप्ति जारी गर्न भनेका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि सोमबारदेखि भेन्टिलेटरमा चिकित्सकले हेरेकै रहेछन् । हेर्दै नहेरी मृत्यु भयो भनेर परिवारलाई समेत खबर गरेछन् । आज हेर्न जाँदा पो बिरामी जीवितै रहेको पाइएछ ।’
← स्थानीय र नेपाल प्रहरी मिलेर खेदे दशगजामा सुरक्षा पोस्ट बनाउन आएका भारतीय प्रहरी
नयाँ नक्साका बिषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने पररास्ट्रको तयारी →
नोभेम्बर 24, 2019 मे 26, 2020 Bishwa Ghatana0
जनवरी 13, 2020 जनवरी 13, 2020 Bishwa Ghatana0